10 Ụmụnna m, achọghị m ka unu ghara ịma na nna nna anyị hà niile nọrọ n’okpuru ígwé ojii,+ ha niile gabigakwara oké osimiri,+ 2 e mekwara ha niile baptizim ịba n’ime Mozis+ site n’ígwé ojii ahụ, sitekwa n’oké osimiri ahụ; 3 ha niile rikwara otu nri ime mmụọ ahụ,+ 4 ha niile ṅụkwara otu mmiri ime mmụọ ahụ.+ N’ihi na ha ṅụburu mmiri nke si n’oké nkume ime mmụọ+ nke so ha, oké nkume+ ahụ pụtakwara Kraịst.+ 5 Otú o sina dị, Chineke enweghị mmasị+ n’ebe ihe ka ọtụtụ n’ime ha nọ, n’ihi na e bibiri+ ha n’ala ịkpa. 6 Ma ihe ndị a ghọọrọ anyị ihe atụ, ka anyị wee ghara ịbụ ndị na-enwe ọchịchọ ihe ọjọọ,+ ọbụna dị ka ha nwere ọchịchọ ihe ọjọọ. 7 Unu abụkwala ndị na-ekpere arụsị, dị ka ụfọdụ n’ime ha mere;+ dị nnọọ ka e dere, sị: “Ndị Izrel nọdụrụ ala iri ihe na ịṅụ ihe ọṅụṅụ, ha wee bilie ikpori ndụ.”+ 8 Ka anyị ghara ịna-akwa iko,+ dị ka ụfọdụ n’ime ha kwara iko, puku iri abụọ na atọ n’ime ha wee nwụọ n’otu ụbọchị.+ 9 Ka anyị gharakwa ile Jehova+ ule, dị ka ụfọdụ n’ime ha lere ya ule,+ agwọ wee laa ha n’iyi.+ 10 Unu abụkwala ndị na-atamu ntamu,+ dị nnọọ ka ụfọdụ n’ime ha tamuru, onye mbibi wee laa ha n’iyi.+ 11 Ihe ndị a nọ na-adakwasị ha dị ka ihe atụ, e dekwara ha ede ka ha bụụrụ anyị ihe ịdọ aka ná ntị,+ anyị ndị ọgwụgwụ nke usoro ihe ndị a+ bịakwasịworo. 12 Ya mere, ka onye chere na ya guzosiri ike lezie anya ka ọ ghara ịda.+ 13 Ọ dịghị ọnwụnwa bịakwasịrị unu nke na-abụghị nke na-abịara ụmụ mmadụ.+ Ma Chineke kwesịrị ntụkwasị obi,+ ọ gaghịkwa ekwe ka a nwaa unu gabiga ihe unu pụrụ idi,+ kama mgbe ọnwụnwa bịara, ọ ga-emere unu ụzọ mgbapụ,+ ka unu wee nwee ike idi ya. 14 Ya mere, ndị m hụrụ n’anya, gbaaranụ+ ikpere arụsị ọsọ.+ 15 Ana m ekwu dị ka ọ̀ bụ ndị nwere nghọta+ ka m na-agwa; tụleenụ ihe m na-ekwu n’onwe unu. 16 Iko+ ngọzi ahụ nke anyị na-agọzi, ọ́ bụghị ikere òkè n’ọbara Kraịst? Ogbe achịcha ahụ nke anyị na-anyawa,+ ọ́ bụghị ikere òkè n’ahụ́ Kraịst?+ 17 N’ihi na e nwere otu ogbe achịcha, ọ bụ ezie na anyị dị ọtụtụ,+ anyị bụ otu ahụ́,+ ebe anyị niile na-eketa òkè n’otu ogbe achịcha ahụ.+ 18 Leenụ ihe ahụ nke bụ́ Izrel n’ụzọ anụ ahụ́+ anya: Ọ̀ bụ na ndị ahụ na-eri ihe ndị a chụrụ n’àjà adịghị eketa òkè n’ebe ịchụàjà?+ 19 Gịnịzi ka m ga-ekwu? Ọ̀ bụ na ihe e ji chụọrọ arụsị àjà nwere ihe ọ bụ, ka ọ̀ bụ na arụsị nwere ihe ọ bụ?+ 20 Ee e; kama ihe m na-ekwu bụ na ihe ndị mba ọzọ na-achụ n’àjà, ha na-achụrụ ya ndị mmụọ ọjọọ,+ ọ bụghị Chineke; achọghịkwa m ka unu bụrụ ndị ha na ndị mmụọ ọjọọ+ na-emekọ ihe. 21 Unu apụghị ịdị na-aṅụ iko Jehova+ na iko ndị mmụọ ọjọọ; unu apụghị ịdị na-eri na “tebụl Jehova”+ na-erikwa na tebụl ndị mmụọ ọjọọ. 22 Ka “ànyị na-akpali Jehova ikwo ekworo”?+ Ànyị ka ya ike?+ 23 Iwu kwadoro ihe niile; ma ọ bụghị ihe niile bara uru.+ Iwu kwadoro ihe niile;+ ma ọ bụghị ihe niile na-ewuli elu.+ 24 Ka onye ọ bụla na-achọ, ọ bụghị uru nke ya,+ kama nke onye nke ọzọ.+ 25 Na-erinụ ihe niile a na-ere n’ọdụ anụ,+ n’ajụghị ase ọ bụla n’ihi akọ na uche unu;+ 26 n’ihi na “ọ bụ Jehova+ nwe ụwa na ihe jupụtara n’ime ya.”+ 27 Ọ bụrụ na onye ọ bụla n’ime ndị na-ekweghị ekwe akpọọ unu òkù, unu achọọkwa ije, rienụ ihe ọ bụla e debere n’ihu unu,+ n’ajụghị ase ọ bụla maka akọ na uche unu.+ 28 Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla asị unu: “Ihe a bụ ihe e ji chụọ àjà,” unu erila ya n’ihi onye ahụ mere ka unu mara banyere ya nakwa n’ihi akọ na uche.+ 29 “Akọ na uche,” ka m na-ekwu, ọ bụghị nke gị, kama nke onye ọzọ ahụ. N’ihi na, gịnị mere ọ ga-eji bụrụ na akọ na uche+ onye ọzọ na-ekpe nnwere onwe m ikpe? 30 Ọ bụrụ na m ji ekele na-eri ya, gịnị mere a ga-eji na-ekwujọ m n’ihe ahụ m na-enye ekele maka ya?+ 31 Ya mere, ma ùnu na-eri ihe ma ùnu na-aṅụ ihe ọṅụṅụ ma ùnu na-eme ihe ọ bụla ọzọ, na-emenụ ihe niile iji nye Chineke otuto.+ 32 Unu abụrụla ndị Juu na ndị Grik na ọgbakọ Chineke ihe ịsụ ngọngọ,+ 33 ọbụna dị ka m na-eme ihe dị mmadụ niile mma n’ihe niile,+ n’achọghị uru nke onwe m,+ kama uru nke ọtụtụ ndị, ka e wee zọpụta+ ha.